शिल्पा र पुष्पको बिहे ! छबिसँग यस कारण झगडा ! शिल्पा भन्छिन्, “म सिनेमा खेल्नुभन्दा पहिले ‘सेक्स’ प्रस्ताव आएको घटनाले तर्सिन्छु” – (भिडियोसहित) – Etajakhabar
काठमाडौं – सयौ म्यूजिक भिडियोमा काम गरेपनि मोडल शिल्पा पोख्रेललाई सिनेमाको भाषा बुझ्न अझै केही समय लाग्नेछ । कारण, सिनेमामा प्रयोग हुने भाषा र केही शब्दहरुमा उनी सानै छिन् । संचारकर्मीका केही प्रश्नमा शिल्पाले यही कारणले हुनसक्छ खुलेर जवाफ दिन सक्दिनन् ।
सिनेमामा अवसर पाउँने वित्तिकै मलाई छवि ओझासँग नाम जोडेर चर्चा गरियो । छविले बिहे प्रस्ताव राखेदेखि लिएर मेरो प्रेमको कुरा समेत गरियो । यसले मलाई त असर गर्‍यो नै, परिवारले समेत प्रश्न गर्‍यो । सिनेमा खेल्दा फाइदा पुग्ने भएपनि मलाई सुरुवातमै घाटा लाग्ने अवस्था आयो । मेरो परिवारले बारम्बार छविसँगको सम्बन्धको बारेमा सोधेपछि मैले ‘लोफर’ नायिका रजनी केसीका केही समचार परिवारलाई देखाए । रजनीसँग पनि छवि ओझाको नाम जोडिएको थियो भनेपछि मेरो परिवार केही शान्त देखियो । यो घटनाले धेरै पटक म कोठा बन्द गरेर रोएकी छु । मिडियामा रेखा थापाको स्थान लिन शिल्पाको प्रवेश भनेर बारम्बार खबर आउँछ । म रेखा थापाको स्थानमा कहिले पुग्न नै सक्दिन । म यहाँ आफ्नो स्थान बनाउन आएकी हुँ । रेखासँग नाम जोड्दा नरमाइलो महशुश हुन्छ ।
मैले सिनेमा खेल्नका लागि नायिकाले आफ्नो ईज्जतको बलिदान दिनुपर्छ भन्ने सुनेकी थिएँ । तर, मैले यो कुरा आफै भोगे । केही म्यूजिक भिडियो खेलेपछि मलाई एक निर्देशकले फिल्म खेल्न बोलाउँनुभयो । उहाँले कुराकानीको दौरानमा ‘तिमीलाई फिल्म दिएपछि हामीले के पाउँछौ’ भनेरे सोध्नुभयो । यो कुराले मलाई लामो समयसम्म पिरल्यो । मेरो मनबाट सिनेमा खेल्ने चाहना सबै हराएर गयो ।
शंकर वीसीसँग भिडियो गर्दै गर्दा छवि ओझाले ‘लज्जा’का लागि अफर गर्नुभयो । त्यतिबेला उहाँले ‘लोफर’ भन्ने सिनेमा नै बनाउनुभएको थिएन । मलाई यो मान्छेले झुलाउन लाग्यो जस्तो सोच पलायो, त्यतिबेला । मलाई फेरि अघिल्लो घटनाले बारम्बार तर्साउथ्यो । मैले खेल्दिन भनेर घर गएँ । ४ महिनापछि छवि ओझाले फेरि फोन गर्नुभयो । मलाई निर्देशक नवल नेपालले पूर्ण विश्वासमा राखेपछि सिनेमा खेल्न राजी भए । अहिले पनि म सिनेमा खेल्नुभन्दा पहिले ‘सेक्स’ प्रस्ताव आएको घटनाले तर्सिन्छु ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फाल्गुण ११, २०७४ समय: २३:२२:२५